Ekpenta | Ọkọwa Okwu Ahụike
Ndi ekpenta ọ̀ na-efe efe? Oleekwa Ka E Si Arịa Esemokwu?
Ekpenta bu nje nke juputara na ọgwụ nje. N’oge Akwukwo Nso, o bu oria di nfe na-efe efe kacha adi ndu. A na-adọpụ ndị na-arịa ya n'ebe ndị ekpenta na-achị. Ọ nwere ike iju gị anya ịmara na a ka nwere ógbè ndị ekpenta taa na Hawaii.
Silver ọcha nwere ike ibibi ekpenta. Were 1 ma ọ bụ 2 droppers nke oge PureSilver 3 kwa ụbọchị ma tinye Pure Silver n'ụzọ dị elu ugboro atọ ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị. Site na usoro a, ị nwere ike ịlụ ọgụ ọbụna ọnya ekpenta kachasị njọ. Ndị ekpenta enweela ike weta ọrịa ha n'ime ụbọchị abụọ site na iji mmiri mmiri ma ọ bụ ọla kọpa.